भाडा-ए-गर्लफ्रेन्ड सिजन २ प्रिमियर मिति + अन्त्यको व्याख्या - क्र्याडल दृश्य
प्रेमिका सिजन २ भाडामा लिनुहोस्
by Dima 25th सेप्टेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड भाडामा-ए-गर्लफ्रेन्ड सिजन २ प्रिमियर मिति + अन्त्यको व्याख्या
धेरै मानिसहरू भाडामा प्रेमिका सीजन2र को अन्तिम एपिसोडको लागि आशा गरिरहेका छन् भाँडा- A- गर्लफ्रेंड अब निष्कर्षमा, र संग काजुयाको को लागि स्पष्ट सदा-वर्तमान प्रेम चिजुरु अन्तिम एपिसोडका पलहरूमा पहिले भन्दा बढी देखिने भएकोले, यो लोकप्रियको अन्त्यको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने समय हो। एनिमे र पत्ता लगाउनुहोस् जब ए प्रेमिका भाडामा लिनुहोस् सिजन २ रिलिज हुने भएको छ ।
चिजुरु पूरा काजुया पहिलो पटक।
कथा हाम्रो मुख्य पात्र काजुयाबाट सुरु हुन्छ। उनको एउटी प्रेमिका छिन्, ममी, जो सुन्दर छिन्। एनिमको प्रारम्भिक एपिसोडमा उनी उनको प्रेममा छन्। मामीले एनिमे भरमा पनि उपस्थिति दिनेछ र उनी एक महत्त्वपूर्ण पुनरावृत्ति पात्र हुन्।
यस शृङ्खलाको कथा तपाईलाई सुरुदेखि नै स्पष्ट हुनुपर्छ तर सो शो नामको एक युवकको बारेमा सोच्ने जो कोहीको लागि काजुया जो एक सुन्दर प्रेमिका नामको साथ कथामा सुरु हुन्छ मामी नानामी.
हृदयविदारक र एक्लो छोडे पछि काजुया उसको फोनमा इन्टरनेट मार्फत सर्फिङ गरिरहेको छ जब उसले एक भेट्छ भाडा प्रेमिका सेवा। म विश्वका अन्य भागहरूको बारेमा निश्चित छैन, तर भित्र रूस र इङ्गल्याण्ड, यो कुनै कुरा होइन (जहाँसम्म हामी जान्दछौं)।
शाब्दिक रूपमा आफ्नो नक्कली प्रेमिकाको रूपमा एक जीवित व्यक्तिलाई भाडामा दिने विचार धेरै टाढाको छ। तर मा जापान? हुदै हैन! यी प्रेमी महिलाहरूले उनीहरूको प्रदान गर्छन् सेवाहरू कुनै पनि मानिसलाई माया गरिएको महसुस गराउन र यो श्रृंखलाले सेवा प्रदायकहरूको लागि फाइदा र समस्या हुनसक्ने विभिन्न तरिकाहरू खोज्दै यसलाई नयाँ स्तरमा विस्तार गर्छ।
पहिलो, हामीसँग छ काजुया, जो लगभग 21 वर्षको हुनुपर्छ तर उहाँ 16 वर्षको जस्तो देखिन्छ। उहाँको छोटो रङको खैरो कपाल र खैरो आँखाहरू छन्। उनले सुन्तला चिन्हको साथ एक विशिष्ट कालो शर्ट लगाउँछन्। म सधैं सोच्छु कि यदि त्यो प्रतीकले केहि प्रतिनिधित्व गर्ने हो तर मन पर्दैन।
उहाँ एक राम्रो मनपर्ने MC हुनुहुन्छ तर उहाँ एकदमै दयनीय हुनुहुन्छ, (उनी नबनाउनु परेसम्म) बोरिंग र वास्तवमा मैले यस्तो कथामा के आशा गरेको छैन, तर त्यहाँ केही समयहरू छन् जहाँ उहाँको वास्तविक प्रशंसनीय पक्ष चम्किन्छ।
दोस्रो, हामीसँग सुन्दर छ चिजुरुउनी भन्दा अलि कान्छी छिन् काजुया म विश्वास गर्छु तर स्पष्ट रूपमा आफ्नो लागि धेरै जाँदैछ। उनको सुन्दरता र आकर्षणले सुरुमा धेरै दर्शकहरूलाई आकर्षित गर्छ।
यद्यपि, त्यहाँ धेरै विशेषताहरू छन् जुन उनीसँग छन् जसले उनलाई धेरै प्रशंसनीय बनाउँछ एनिमे, र एक क्यारेक्टर म पक्कै पछाडि जान सक्छु यदि उनी MC थिइन् भने।
यसमा उप-पात्रहरू भाँडा- A- गर्लफ्रेंड तिनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै राम्रो छन्। मलाई जेठी हजुरआमाको चरित्र मन परेन र उनीहरूले उनको अति प्रयोग गरे जस्तो लाग्यो। साथै, काजुयाको साथी यस्तो हारेको थियो। उसले आफ्नो जीवनमा यस्ता व्यक्तिहरूसँग कसरी संगत गर्न सक्छ मलाई बुझ्दैन। उसको सबैभन्दा मिल्ने साथी स्पष्ट रूपमा उसलाई रग्यो। र सायद यही कारणले उसले ए पाउँछ भन्ने सोच्यो भाडा प्रेमिका पहिलो स्थानमा राम्रो विचार थियो। र सबै साँच्चै मात्र आफ्नो साथी प्रभावित गर्न।
मामी पक्कै पनि तपाईं वरपर हुन चाहनुहुने केटीको प्रकार होइन। र विशेष गरी तपाईको पार्टनरको रूपमा होइन। त्यसोभए जब उनले उसलाई अर्को केटाको लागि छोड्छिन् यो अचम्मको रूपमा आउँछ। शृङ्खलामा पछि तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि उनले उसलाई किन छोडिन् र किन उनको चरित्र यति चिसो छ।
अब अन्त्य हुन्छ भाँडा- A- गर्लफ्रेंड यो मेरो विचार मा हुन सक्छ लगभग राम्रो थिएन। यी सबै पछि र मुख्य पात्रहरूसँग हामी अझै पनि केहि प्राप्त गर्न सक्दैनौं। यी सबै दृश्यहरू गतिविधिहरू समावेश छन् जुन हाम्रो क्यारेक्टरहरूलाई स्थितिमा राख्नको लागि तिनीहरूलाई डुङ्गा दृश्य जस्तै नजिक बनाउनको लागि बनाइन्छ। चिजुरु र काजुया लगभग सबै प्रकारको अर्थहीन महसुस डुब्यो।
के चिजुरु लागि गहिरो भावना छ काजुया?
यसको कारण यो हो काजुया उसले वास्तवमै कस्तो महसुस गर्छ भनेर मात्र ब्लर गर्दछ चिजुरु त्यसपछि छिट्टै पछाडि फर्कने प्रयास गर्छ र यसलाई मजाकको रूपमा खेल्छ। कस्तो बर्बादी। जे होस्, यो संग समाप्त हुन्छ काजुया स्पष्ट रूपमा अझै पनि लागि आफ्नो गहिरो इम्बेडेड भावनाहरू आश्रय गर्दै चिजुरु लगभग सबै विवरणहरू उसलाई र साथ फैलाए पछि चिजुरु अझै कोही बुद्धिमानी छैन (त्यसैले हामी सोच्छौं)।
काजुया हेर्दछ रुका सरशिना
यो एक सानो प्रकार को cliffhanger छ। यदि हामीलाई थाहा छैन काजुया अन्ततः स्वीकार गर्नेछ। आशा छ? मलाई लाग्छ कि अन्त्यको अर्थ यही हो। हुनेछ चिजुरु कहिले कसरी पत्ता लगाउनुहोस् काजुया साँच्चै उनको बारेमा महसुस गर्नुहुन्छ? र हुनेछ काजुया कहिल्यै साँच्चै स्वीकार? यदि नयाँ सिजन आउँदैछ भने, हामी निश्चित रूपमा यो सत्य हुन्छ कि भनेर हेर्न पाउनेछौं। कारण पत्ता लगाउन पढ्न जारी राख्नुहोस्।
के भाडा-ए-गर्लफ्रेन्डले सिजन २ पाउँछ?
चिजुरु Kazuya बचाउँछ
त्यसोभए पक्कै पनि हामी दोस्रो सिजनको ग्यारेन्टी गर्न यहाँ छैनौं भाँडा- A- गर्लफ्रेंड, त्यो हामीले गर्ने मात्र होइन। बरु, हामी तपाईंलाई श्रृंखलामा हाम्रो आफ्नै अनुसन्धानमा आधारित जवाफ दिन चाहन्छौं। हामीले सिजन2लाई विश्वास गर्नुको कारणहरूको सानो संख्या तल दिइएको छ भाँडा- A- गर्लफ्रेंड हुन सक्छ। त्यसोभए कारणहरूमा डुब्ने गरौं ए भाँडा- A- गर्लफ्रेंड सिजन २ सम्भव छ।
सबै को पहिलो, मंगा, द्वारा लिखित रेजी मियाजिमा अझै जारी छ, र नयाँ अध्यायहरू प्रकाशित भइरहेका छन् हालै यस वर्ष अगस्ट 21 को रूपमा। त्यसैले द मंगा अझै जारी छ र कथा अझै फाइनल भएको छैन।
अहिले सम्म, वरिपरि भएका छन् Cha अध्यायहरू को मंगा अनुकूलित। वास्तवमा एनिमे अध्याय 50 को वरिपरि कतै समाप्त हुन्छ। अहिले सम्म त्यहाँ 162 अध्यायहरू छन् जुन हाल प्रकाशित भएका छन्। यसको मतलब त्यहाँ दोब्बर भन्दा बढी स्रोत सामग्री अनुकूलन गर्न छ। त्यसैले त्यहाँ कुनै वास्तविक कारण छैन भाँडा- A- गर्लफ्रेंड सिजन2सम्भव छैन किनभने यो सजिलै अनुकूलन योग्य छ।
भाँडा- A- गर्लफ्रेंड मा एक धेरै लोकप्रिय एनिमे छ क्रंचयरोल। पैसा एक सिजन2बनाउन सक्छ बेवास्ता गर्न गाह्रो हुनेछ। कुनै पनि उत्पादन कम्पनी को लागी। द मंगा लोकप्रिय मा सुविधाहरू कोडांशाको साप्ताहिक शोनेन पत्रिका। यो एउटा पत्रिका हो, संसारभरका धेरै स्ट्रिमिङ र मिडिया साइटहरूमा चित्रित।
माथि उल्लिखित कारणहरूका लागि, हामी विश्वास मात्र गर्दैनौं भाँडा- A- गर्लफ्रेंड सिजन २ सम्भव छ तर परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै। यो साँच्चै समय को कुरा हो।
जापानको अर्थतन्त्र COVID-19 महामारीको कारणले सुस्त भएको छैन, बरु छिटो निको हुँदैछ। केसहरू दिन प्रतिदिन घट्दै गइरहेका छन् र नयाँ उपचारहरू पत्ता लागिरहेका छन्। आशा छ, यसको मतलब यो हो कि गर्लफ्रेन्ड सिजन २ को रिलिज मिति हामी वा तपाईंले सोचेको भन्दा धेरै चाँडो हुनेछ।
कहिले भाँडा-ए-गर्लफ्रेन्ड सिजन2प्रिमियर हुनेछ?
चिजुरु आफूलाई परिचय दिन्छ काजुयाको मित्र
हामी अनुमान गर्छौं कि भाँडा-ए-गर्लफ्रेन्डको वरिपरि हालको प्रचारलाई एक सिजन २ पहिले नै राम्रोसँग चलिरहेको छ, कास्टिङ र उत्पादन पहिले नै कार्यमा छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौं। ए भाँडा- A- गर्लफ्रेंड सिजन २ जनवरी २०२२ को बीचमा वा वर्ष २०२२ मा धेरै पछि आउन सक्छ।
को रूपमा भन्न गाह्रो छ एनिम उद्योग एक अप्रत्याशित एक हो र कहिलेकाहीँ लोकप्रिय शोहरूले दोस्रो सिजन पनि कहिल्यै देख्दैनन् जबकि धेरै मन नपर्ने कार्यक्रमहरू तपाईंले "सिजन २" लाई १, २, र थप ३ सिजनहरू प्राप्त गर्ने वाक्य पनि सुन्नुहुन्छ भनेर सोच्नुभएन। हामीले पहिले उल्लेख गरेझैं, ए को लागी संभावना मात्र होइन भाँडा- A- गर्लफ्रेंड धेरै उच्च छन्, तर आवश्यकता।
मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरू सुखद अन्त्य हेर्न चाहन्छन् चिजुरुको र काजुयाको सम्बन्ध। जस्तै मुगी र हानबीको मा सम्बन्ध Scums इच्छा, अर्को रोमान्स ड्रामा हामीले यस साइटमा केही समय अघि कभर गरेका थियौं, प्रशंसकहरू कम्तिमा केही निष्कर्ष हेर्न चाहन्छन्। र आशा छ, द भाडा-ए-गर्लफ्रेन्ड एनिमे अर्को सिजन देख्नेछ।
हामी आशा गर्छौं कि यस लेखले तपाईंलाई सम्भाव्यता बुझ्न मद्दत गरेको छ प्रेमिका भाडामा लिनुहोस् सिजन २ रिलिज मिति र यदि सिजन २ को प्रेमिका भाडामा लिनुहोस् वास्तवमा सम्भव छ। सधैंको रूपमा यो हामीले यी लेखहरूको लागि लक्ष्य राखेका छौं।
Chizuru आफ्नो कार्यहरु मा प्रतिबिम्बित
कृपया हाम्रो स्टोर जाँच गर्ने विचार गर्नुहोस् ताकि तपाईं केहि मौलिक लिन सक्नुहुन्छ एनिमे व्यापार र मद्दत समर्थन हाम्रो साइट लेखकहरू र प्रशासकहरू। पढिदिनु भएकोमा धन्यवाद, हामीले आशा गर्यौं कि तपाईंले यो लेख रमाइलो गर्नुभयो, हामी तपाईंलाई शुभकामना दिन्छौं।
अघिल्लो प्रविष्टि शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ एनिमे Waifus
अर्को प्रविष्टि स्कम्स इच्छामा अकानको हेरफेर भूमिकाको अन्वेषण गर्दै